कहिले सकिएला नागढुंगा सुरुङमार्ग ?
काठमाडौं । काठमाडौं भित्रने र बाहिरिने मुख्य नाका रहेको नागढुंगा सुरुङमार्गको ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।विभिन्न विकास पूर्वाधारको निर्माणअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्गको काम धमाधम भएको हो । अब सुरुङको सबै काम सम्पन्न गर्न ४७ प्रतिशत काम बाँकी रहेको आयोजना निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए । सुरुङमार्ग समयमा नै सम्पन्न हुन भने केही कठिन देखिएको छ […] The post कहिले सकिएला नागढुंगा सुरुङमार्ग ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.